Akụkọ - Nzukọ Nchedo Ọrụ
Ihe ngwungwu Opto-Electronic
Ihe mmetụta Sensor
Ihe ndị na-abụghị ndị pụrụ iche / pụrụ iche
Ihe ngwugwu okirikiri
On Mar.1, 2020 Jitai Electronics Co., Ltd ẹkenịmde nzukọ nchekwa nzukọ site na mmepụta dept. ime atụmatụ maka ndokwa afọ a na nchekwa ọrụ.
Ndokwa nke nchekwa ọrụ na 2020
Site na Mar.1, 2020 ruo Dec.31, 2020 enwere usoro atọ:
Nzọụkwụ mbụ: Mar.1 ruo Mar.31, ndị ọrụ niile si na ngalaba niile gụrụ akwụkwọ maka ịbuga maka "arụ ọrụ nke mmezigharị pụrụ iche maka nchekwa ọrụ" na-agagharị ma na-eme ka akọ na uche nke ihe ize ndụ dị na ya pụta ma na-eme ka usoro mgbanwe dị mma dị mma. Ngalaba niile gbadara mbenata ma mejuputa ọdịnaya dị na ọrụ nke mmezigharị pụrụ iche, mejupụta ikike nke akụrụngwa na akụrụngwa na ngalaba nke ha yana ọnọdụ ojiji iji hụ na enwere ike ịbanye na-enweghị akụkụ ikpuchi, mpaghara nwụrụ anwụ na enweghị ike ịgafe mmegharị ahụ.
Agba nke abụọ: Eprel. 1 ruo Sept.30, ngalaba niile na-arụ ọrụ na-elekwasị anya na ndị ọrụ isi, isi ihe na njikọ njikọ ma rụọ ọrụ mkpuchi zuru oke na nlekota oru websaịtị. Dabere na usoro nchekwa abụọ gara aga na-arụ ngalaba niile oke ọnụ ọgụgụ dị egwu na ọnọdụ nchekwa na ngalaba niile wee tinye ọrụ nke ọkwa niile wee were nnukwu ihe iji mezue mmezi ma hụ na ihe egwu niile nwere ike ịdakwasị ma tụọ ya wee dezie ya. gabiga.
Oge nke Thrid: Ọkt.1 ruo Dec.31, ngalaba niile kwesịrị ịdabere na ngalaba niile nwere ọrụ na mmezigharị pụrụ iche iji meziwanye ma na-ewusi mmetụta nke mmegharị pụrụ iche.
Na-arụ ọrụ chọrọ
1. Nlekọta nlekọta, na-akọwapụta ọrụ, na-emezi mmezi. Onye isi njikwa, onye njikwa, onye isi ọrụ, onye isi otu na ndị ọrụ niile kwesịrị ị paya ntị na nhazi nke ihe egwu dị na nchekwa ọrụ. Were ọrụ dị oke mkpa, nhazi nkwekọrịta zuru oke ma kpokọta ndị ọrụ niile na-eme ihe ngosi dị egwu ma kọọrọ nsogbu na ihe ọghọm na ọkwa nchekwa ọrụ site na ọkwa ma gbanwee ozugbo ma debanye aha na ntinye maka ndị ọzọ agaghị emezigharị n'oge.
2. Mee ka ọzụzụ agụmakwụkwọ na njikwa ubi dị ike. N'ime oge ịlele onwe gị na mgbazi maka ihe egwu dị na ya, ọ ga-emejuputa ọzụzụ ọzụzụ dị ike maka ndị ọrụ niile ma mejuputa usoro ọzụzụ ọzụzụ tupu oge eruo. Ọ ga-ewulite ebe ọrụ nchekwa dị oke egwu site na ọzụzụ, nkuzi, ntụzi ubi na ụdị n'ụdị yana akara mgbaàmà nke nchedo nchedo, ọkụ akpachapụ anya nchekwa, mkpọsa ihe ọmụma nchekwa.
3. Meewanye nlekọta mberede, hazie mmeghari ihe mberede. Iji melite ndị ọrụ niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emetụta ihe mberede na ịmaliteghachi onwe ha na ibe ha na ebumnuche gaa mpaghara dị egwu na ụlọ ọrụ na usoro dị egwu na-enyocha ma na-agbanwe ma na-emezigharị atụmatụ emezigharị nke mmezi ihe mberede na ihe gbasara ubi na-ahazi mmegharị hazie tupu oge eruo.
Companylọ ọrụ anyị ga-enwe ike ịkọwapụta "usoro nyocha nke ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ na nchekwa ọrụ" yana usoro ndị ikwu. A ga-akwụghachi ya ụgwọ maka inweta ebumnuche ọrụ kwa afọ. A ga-emeso ya ihe ma ọ bụ taa ya ahụhụ maka ngalaba ma ọ bụ ndị ọrụ nke na-akpata ihe mberede n'ihi ihe egwu dị egwu na-abụghị n'oge. Ọ ga-abụ ihe mmụta dị oke mkpa iji dọọ ndị na-emebi ịdọ aka ná ntị aka n'oge ọ ga-ata ya ahụhụ nye ọtụtụ ndị na-eme ugboro ugboro.